mkpọchi Factlọ ọrụ - China bolts Manufacturers, Suppliers
Hegzagon Socket mkpọchi
a na-eji ihe mkpuchi oghere hegzagon jikọọ akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa ọnụ iji mepụta nzukọ ma ọ bụ n'ihi na enweghị ike ịmepụta ya dị ka otu akụkụ ma ọ bụ iji nye ohere maka ndozi na ndozi disassembly. a na-ejikarị oghere hexagon arụ ọrụ na ịrụzi na ịrụ ọrụ.
Flange Head mkpọchi
Flange head bolts na-eji kegide abụọ ma ọ bụ karịa akụkụ ọnụ na-etolite nzukọ ma n'ihi na ọ na-apụghị arụpụtara dị ka otu akụkụ ma ọ bụ na-enye ohere maka mmezi na mmezi disassembly.flange isi bolts na-akasị ji arụzi na-ewu ọrụ. ha nwere isi ntutu isi wee bia na ihe igwe maka njikwa siri ike.
A na-eji ihe nkedo Hex mee ka akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa jikọta ọnụ iji mepụta mgbakọ ma ọ bụ n'ihi na enweghị ike ịmepụta ya dịka otu akụkụ ma ọ bụ iji nye ohere maka ndozi na mmezi dismantling. ha nwere hexagonal isi na-abịa na igwe eri maka a ike na o siri ike njikwa.
Nwa mkpuchi Hex Mkpọchi, Black Oxidation Hex mkpọchi, Din6921 Flange Mkpụrụ, Hegzagon Socket Head mkpọchi, Nnukwu Ike Hex Bolts, Mkpọchi,